Kuyamcika umqeqeshi weBaroka ukukhetha imidlalo kwabadlali bakhe - Impempe
Kuyamcika umqeqeshi weBaroka ukukhetha imidlalo kwabadlali bakhe
Sekuyinto eyaziwayo nejwayekile ebholeni lakuleli ukuthi lamaqembu okuthiwa mancane adlalela ukufa nokuphila uma ebhekene nezinkunzi zeDStv Premiership, okuyiKaizer Chiefs, Orlando Pirates neMamelodi Sundowns, kodwa abhacaze uma edlala nontanga.
Lokhu kuyamcika umqeqeshi weBaroka, uMatsimela Thoka othi uhlale elishumayela ivangeli lokuzimisela nokuzikhandla kuyo yonke imidlalo kwazise amaphuzu abawathola kwiChiefs ayafana nabawathola kwamanye amaqembu.
“Ngingavuma ngithi yebo kunjalo,” kusho uThoka kade ebuzwe ukuthi ngabe unawo yini umuzwa wokuthi abadlali bakhe bafaka umfutho othe xaxa futhi bazikhandle ngokuphondiwe uma bedlala namaqembu amakhulu.
IBaroka ikhiphe unyawo idlala neChiefs ngoLwesibili eFNB Stadium, futhi icishe yakhala yemuka nawo wonke amaphuzu kodwa yaqhuzuka ngasekugcineni umdlalo waphela zibambene ngo 1-1, kwacazelwana amaphuzu.
“Akwenzeki njalo, kodwa khona kuyenzeka. Uma singenza ucwaningo, singathola ukuthi bakhona abadlali abakhuthala kakhulu uma sidlala neChiefs, Pirates neSundowns.
“Angikuthandi lokho. Ngihlale ngibatshela abafana bami ukuthi amaqembu ayefana, imidlalo iyefana namaphuzu ngokunjalo. Kumele siye kuyo yonke imidlalo ngomfutho ofanayo. Uma umdlali efuna ukudlala kahle uma sibhekene neChiefs kuphela, okusho ukuthi akayena umdlali wangempela.”
Uthe usazoqhubeka nokufafaza ivangeli lokuthi kumele kungakhethwa imidlalo, kodwa kuqiniswe unyawo kuyo yonke ukuze iqembu lingazitholi selivika izembe.
“Amaphuzu ayefana, ngakho kumele sizinikele ngokufanayo kuyo yonke imidlalo yethu. Siyazama ukuwuqeda lo mkhuba wokukhetha imidlalo. Kodwa ke iqembu lethu ligcwele abafana abasebancane abavele bajabule ngokweqile uma sidlala neChiefs, bese bezikhandla.
“Kodwa uma sewuya emdlalweni asithi nje neMaritzburg (United) noma neGolden Arrows, ajike umdlali angabe esayenza lento abeyenza kwiChiefs. Nokho sinethemba lokuthi sizokulungisa lokho, bese sibagxisha umqondo omuhle wokuzimisela kuyo yonke imidlalo,” kuchaza uThoka.
Previous Previous post: Wethembisa ukwengeza la kushiye khona uLampard umqeqeshi omusha weChelsea
Next Next post: Lihoxisiwe icala lokushaya ebelibekwe isilomo sePirates uLorch